भर्नाको अवधारणा र आन्तरिक भर्नाका बिधि उल्लेख गर्नुहोस ? - सरकारी जागिर
खरिदार नायब शुब्बा बैंकिंग स्थानीय तह
भर्नाको अवधारणा – CONCEPT OF RECRUITMENT
निश्चित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सङ्गठन स्थापना गरिन्छ । लक्ष्य हासिल गर्न अनेक प्रकारका कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्दछ । यसका लागि नयाँ कर्मचारीहरू भर्ना गर्नुपर्दछ । भर्ना मानव संसाधन व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हो । सङ्गठनको आवश्यकता अनुसार योग्य उम्मेदवार खोज्ने तथा आवेदन गर्न लगाउने प्रक्रियालाई भर्ना भनिन्छ ।
नयाँ सङ्गठन स्थापना गर्दा नयाँ कर्मचारीहरू आवश्यक पर्दछ । सङ्गठनको विकास, विस्तार, विविधीकरण र परिवर्तन गर्दा पनि नयाँ कर्मचारीहरू आवश्यक हुन्छ । विभिन्न कारणले सङ्गठनमा रहेका कर्मचारीहरूले फाटफुट राजिनामा गर्दछन् । अवकाश प्राप्त गर्दछन् । यावत् कारणहरूले गर्दा सङ्गठनमा नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सङ्गठनको सफलता मूख्य रूपमा मानव संसाधनमा निर्भर गर्दछ । तसर्थ, कर्मचारी भर्ना गर्दा निकै सतर्कता अपनाउनु पर्दछ । कामको प्रकृति र स्तरअनुसार सही व्यक्तिलाई सही स्थानमा (Right man in right place) हुने गरी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसले सङ्गठनको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दछ । यदि सक्षम र योग्य व्यक्ति भर्ना गर्न सकिएन भने यसले सङ्गठनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ ।
आन्तरिक भर्नाका विधिहरू (Internal Recruitment Methods)
सङ्गठनभित्र बहाली रहेका कर्मचारीहरूमध्येबाट भर्ना गर्ने विधिलाई नै आन्तरिक भर्ना भनिन्छ । आन्तरिक भर्नाका प्रमुख विधिहरू निम्नानुसार छन् :
क. बढुवा (Promotion):
एक तह मुनिका कर्मचारीहरूमध्येबाट भर्ना गर्ने विधिलाई बढुवा भनिन्छ । यसमा जुन पद रिक्त हुन्छ, त्यसको ठीकमुनि कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट उत्कृष्ट कर्मचारी चयन गरिन्छ । यो फाइल बढुवा हो । यसरी बढुवा गर्दा योग्यता र अनुभवलाई आधार बनाउनु राम्रो हुन्छ।
ख. स्थानान्तरण (Transfer):
सङ्गठनभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा कर्मचारीलाई खटाउने विधिलाई स्थानान्तरण भनिन्छ । यस विधिमा कर्मचारीलाई एक शाखा वा विभागबाट अर्को शाखा वा विभागमा पठाइन्छ । स्थानान्तरण गर्दा कर्मचारीको तह, मान र पारिश्रमिकमा परिवर्तन हुँदैन । सङ्गठनको आवश्यकता, कर्मचारीको चाहना र सीपको आधारमा उनीहरूको स्थानान्तरण गर्नुपर्दछ ।
ग. घटुवा (Demotion):
माथिल्लो पदबाट मुनिको पदमा झारेर कर्मचारी भर्ना गर्ने विधिलाई घटुवा भनिन्छ । यो भर्ना विधि अवलम्बन गरेको विरलै पाइन्छ । सामान्यतया घटुवालाई दण्ड, सजायको रूपमा लिइन्छ । सङ्गठनको सङ्कुचन गर्दा पनि माथिल्लो पद सङ्ख्या रद्द गरी कर्मचारी घटुवा गरिन्छ ।
घ. आन्तरिक विज्ञापन (Internal advertisement):
रिक्त पदको आन्तरिक विज्ञापनबाट पनि कर्मचारी भर्ना गर्न सकिन्छ । यस विधिमा सङ्गठनका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई जानकारी हुने गरी रिक्त पदको (Vacancy) सूचना जारी गरिन्छ । यसमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता र अनुभवसमेत खुलाइएको हुन्छ । निर्धारित अवधि भित्र इच्छुक र योग्य कर्मचारीले उक्त पदको लागि लिखित निवेदन दिन्छन् । स्थानान्तरण र बढुवाका लागि पनि आन्तरिक विज्ञापन गर्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा,भर्नाको मूल उदेश्य छनोट प्रक्रियाका लागि उमेदवारहरुको संख्या बृधि गर्नु हो । उमेदवारहरुको संख्या जति बढी हुन्छ, त्यति नै अनुपातमा छनोट प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ । आजको प्रतिस्पर्धी समयमा, संगठनको सफलतामा भर्नाले महत्वपुर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले भर्नालाई प्रभावकारी बनाउनु संगठनको लागि ठुलो चुनैती रहेको छ ।
October 1, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir
देशको बैकिंग बिकासमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको भूमिका
November 2, 2018 July 24, 2019 Sarakari Jagir